DAAWO SAWIRO:- Madaxweynaha oo magaalada Addis Ababa uga qeyb galaya shir madaxeedkii 26-aad ee Midowga Afrika.
on January 30 2016 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka degay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaas oo uu kaga qeybgeli doono shir madaxeedkii 26-aad ee Midowga Afrika.
DHAGEYSO:- Axmed Madoobe "Waan shirnay, waan wada hadalney waxbo markaan isla meel dhigi weyney, waxaa noo taliyey beesha caalamka.."
on January 29 2016 Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa shaaciyay in heshiiskii kasoo baxay shirkii Muqdisho ee madasha wadatashiga qaranka ee looga hadlaayay nooca doorasho ee dalka ka dhici doonto sanadkaan 2016-ka uu ahaa mid lagu khasbay islamarkaana dusha looga keenay.
XOG:- Wasaaradda maaliyadda oo lacag uu leeyahay maamulka gobalka Banaadir kala baxday bankiga dhexe Soomaaliya.
on January 29 2016 Ilo xog-ogaal ah oo aynu ka heleyno mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay bankiga dhexe Soomaaliya kala baxday lacag gaaraysa 1 million oo doolar, ee uu lahaa maamulka gobalka Banaadir.
XOG:- Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prof. Jawaari oo ganfuur isku taag isku wadda iyo arrintaasi oo...
on January 29 2016 Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa la sheegay inay ka dhex tafan tahay kadib markii xiriirka labadaasi mas'uul uu gaaray meeshii ugu sareeysay.
XOG:- Maamulka Puntland oo arrin culus la damacsan wafdiga ra'iisul wasaare Cumar C/rashiid oo maanta Puntland ku wajahan.
on January 29 2016 Wafdi uu horkacaayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaake iyo xubno ka socda wakiilada beesha caalamka oo maanta isku diyaarinaya�inay tagaan magaalada Garoowe ee xarunta maamulka�Puntland ayaa madaxda maamulkaasi waxay kala xaajoon doonaan diidmada�ay kala hor yimaadeen war-murtiyeedkii ay dowladda federaalka Soomaaliya soo saartay ee ku xusnaa nooca doorasho ee dalka ka dhici doonto sanadkaan 2016-ka.